DH Flexo kushandiswa | Leading flexo printing machine manufacturer
Tora, kubata kabhokisi uye kushandiswa kwepurasitiki
Pakutanga yakagadzwa mu1996, DH Flexo Printing Technology Inc. yave kuve inotungamira flexo yekudhinda muchina muChina.
Pashure pemakore ekuwedzera kweCNUMX, DH yakabudirira yakabudisa mamiriyoni emagumo ekuputika kwekodhi yemichina yekudhinda yakavhara mumusika wekavara, kubata makaroni uye kushandiswa kwemapurasitiki pakudhinda. Zvose izvi mishonga yakagadzirirwa kukupa basa rinokurumidza rakagadziriswa, basa rakanakisisa rokudhinda uye zvishoma zvidhina.
DH-OFEM Gearless CI machine flex printing
DH-OFEM imodhini yemapuraneti yemapuraneti yezuva ranhasi yekugadzirwa kwehupamhi hwepamusoro. Yakavakirwa pamusoro pechirevo chemufananidzo, nechinangwa chisarudzo chemidziyo yakazara.
DH-ROC Gearless modular flexo mhizha yekudhinda
DH-ROC inopera pamagetsi ekudhinda motokari yemhepo flexo ne gearless driven system. Izvo zvakagadzirwa nokukurumidza ndeye 450m / min uye inotora teknolojia yakafambisa mberi yakadai semashandisirwo emasikirwo, gearless drive system, inline 100% kuongorora kwehutano nezvimwe.
DH-Kirin modular flexo muchina wekudhinda wakagadzirirwa kupa nekukurumidza kumisikidza basa. Iyo ndiyo yako yakanakisa sarudzo chitaridzi & inoshanduka kurongedza kudhinda basa. Inogona kuve yakashongedzwa nezvakawanda zvakasarudzika zvikamu senge kufa-kucheka, kutonhora kutonhora, lamination uye sheeter etc.
DH-JL 2200mm yakawanda mhepo yekupura flexo yakagadzirira kuendeswa
DH-FP yakaomesesa flexo ichienda kuUganda
DH-Jiaolong pre-printing machine yakaratidza paShanghai 2019 SINO Corrugated Exhibition.
Itsva DH-ROC mhepo yakakura yemasikirini yemichina yakapihwa kune vatengi
Mutsva DH mazita flexo makina okudhinda akaiswa muTurkey
Copyright © 2021 DH Flexo Kudhinda - Lyrical WordPress theme na GoDaddy